काँग्रेसको प्रश्न– एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी स्रोत किन दुरूपयोग ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV काँग्रेसको प्रश्न– एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी स्रोत किन दुरूपयोग ? | Sagarmatha TV
काँग्रेसको प्रश्न– एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारी स्रोत किन दुरूपयोग ?
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनु सुखद् भएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको आईतबार बसेको बैठकले सरकारले हालै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुखद र सकारात्मक रहेको जनाएको हो ।
तर यसको प्रचार शैली भने अनावश्यक र भड्किलो भएको भन्दै काँग्रेसको आपत्ति छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउनु सुखद भएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनु भयो । उहाँले प्रचार शैली भने व्यवहारिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । काँग्रेसले सो सामाजिक सुरक्षा योजना सफल कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारलाई शुभकामना दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको काँग्रेसको दावी छ । त्यसैगरी काँग्रेस बैठकले ‘एशीया प्यासिफिक समिट’ मासरकार आफै सहभागी हुनु दुःखद भएको पनि जनाएको छ ।
धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको सरकारले कुनै धर्म विशेषको कार्यक्रममा सहभागी भएर संविधानको मर्म विपरित काम गरेको काँग्रेसको आरोप छ । प्रवक्ता शर्माले सो कार्यक्रममा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिताप्रति पार्टीको आपत्ति रहेको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेसले खास धार्मिक आस्थामा आधारित संस्थाको कार्यक्रममा सरकारले राज्यको स्रोत तथा साधनको समेत दुरुपयोग गरेको गम्भिर आरोप छ ।